Ukutya okungaphakathi kweSeti yeFektri | I-China yokuNgena kweNgxowa yeeNkxaso zaBenzi kunye nabaXhasi
I-KL-602 Impompo yesirinji
I-KL-8052N Impompo yokufakwa
Ukusetyenziswa kwePump Infusion ...
Intlawulo ye-ENFit yokuNgena kwiZondlo ...
I-Kangaroo Tube yokuTya iPompo ...
I-ENFit yokungena kwesondlo kwiTyhubhu yokuSonga i-Cap yokuSetyenziselwa ukuSebenzisa kunye nokuSebenzisa kwePompo
I-1.Our-layer-co-extrusion tubes isebenzisa i-TOTM (i-DEHP yasimahla) njengeplastizerizer. Uluhlu lwangaphakathi alunambala. Umbala omfusa womaleko ongaphandle unokuthintela ukusetyenziswa gwenxa kweeseti ze-IV.
2.Ihambelana neempompo zokondla ezahlukeneyo kunye nezikhongozeli zesondlo esingamanzi.
Isinxibelelanisi se-ENFit ® samanye amazwe sinokusetyenziselwa iityhubhu ezahlukeneyo zokondla i-nasogastric. Uyilo lwalo lokudibanisa i-ENFit ® lunokuthintela ukondla iityhubhu ekungeneni ngengozi kwiiseti ze-IV.
4.Its ENFit ® isinxibelelanisi sikulungele ukondla isisombululo sezondlo kunye neetyhubhu zokugungxula.
5. Sineemodeli ezahlukeneyo kunye nokubalulwa ukuhlangabezana neemfuno zeklinikhi ezahlukeneyo.
Iimveliso ze-6 zinokumangalelwa kwimibhobho yokondla i-nasogastric, iityhubhu zesisu se-nasogastric, i-catheter yesondlo yokungena kunye neempompo zokondla.
7.Ubude obuqhelekileyo betyhubhu yesilicon yi-11cm kunye ne-21cm. I-11cm isetyenziselwa ukujikeleza kwempompo yokondla. I-21cm isetyenziselwa inkqubo ye-peristaltic yempompo yokondla.
Ukondla kwangaphakathi Cwangcisa iNgxowa yeSondlo
Isinxibelelanisi samazwe aphesheya esihambileyo sinokusetyenziselwa iityhubhu ezahlukeneyo zokondla i-nasogastric. Uyilo lwaso lokudibanisa isinxibelelanisi sinokuthintela iityhubhu zokondla ekungeneni ngengozi kwiiseti ze-IV.
Isinxibelelanisi esenziwe nge-Y sayo sikulungele ukondla isisombululo sezondlo kunye neetyhubhu zokugungxula.